Uwa nile nke uwa, dika ndu nke ndu n’ezie, di oke oke nke na o ga – ooi gi ndu ugbua ka i ghagharia ihe o bula.
Iji mee ka nke ahụ bụrụ eziokwu, site na oge ị mechara, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe ike ịmalite ịmalite ọzọ.
Ihe niile a maara nke ọma, mana ole n’ime gị maara na ọdịnaya ị na-ezute na weebụ bụ obere ọnụ mmiri icepe?
Amụma: Tupu ịga n’ihu, ọ dị mkpa ka ị ghọta na ọtụtụ ihe dị na Web Gbara Ọchịchị na-akwadoghị iwu. N’agbanyeghị ihe ị na-eme, ị ga-enwe ike ịnọ na-amaghị aha. Tinye na ihe ize ndụ gị!
0.1 1. Ibudata ma wụnye ihe nchọgharị TOR
0.2 2. Tụlee ịkwụ ụgwọ maka ọrụ Ntọala Onwe Gị
0.3 3. DuckDuckGo bụ enyi gị
0.4 4. Debanye aha maka adreesị ozi-e
0.5 5. Igwe ntanetị weebụ nchịkwa
1 Kedu otu nchekwa si dị na Play na Web Gbara Ọchịchịrị?
1.1 Ọgwụ Dwelm
1.2 Egbe, Gold na Ego nkịtị
1.3 Ntinye na Mmebi Iwu Mmekọahụ
2 Nchịkọta Ntanetị Web
2.1 1- Gbaa mbọ hụ na ihe nchọgharị Tor na njedebe
2.2 2. Walzọ Zoro Ezo
2.4 6. Zụta Bitcoins na Blockchain
2.5 8. Ọwa
2.7 12. Apụl 4 Bitcoin
2.9 16. ụrụ ESCROW
3 Ajuju ajuputara Na Ntughari N’aga n’iile n’iile
1. Ibudata ma wụnye ihe nchọgharị TOR
N’agbanyeghị na ọ dị ugbu a dị ka ihe nchọgharị a na-ejikarị eme ihe iji nweta akụkụ nke Weebụ Gbara Ọchịchị, TOR (alias, ihe nchọgharị weebụ) na-emepụta iji nyere aka ichekwuuke nkwurta.
Taa, ọ bụ otu n’ime ụzọ ole na ole iji nweta .onion weebụsaịtị, nke dị na Web Dark.
TOR bụ nsụgharị nke nchọgharị weebụ Firefox, gbanwee iji kwe ka ndị ọrụ na-agagharị na weebụ n’enweghị aha. A na-eme nchọgharị ahụ iji gbochie ma ọ bọ new ndụmọdụ megide mgbalị ndị ọrụ iji mee ihe ndị nwere ike igosipụta njirimara ha, dịka ịmeghachi akụkụ nke windows windo, dịka ọmụụ.
Mgbe ị na-echere TOR ibudata, wepụta oge iji rachie otu mpempe akwụkwọ kpuchie anya igwe elekere kamera gị. Ị Maghị ek is imke ime.
Na – lelee vidiyo nke mmeghe site na TOR.
2. Tụlee ịkwụ ụgwọ maka ọrụ Ntọala Onwe Gị
Netwọk Nhọrọ Onwe Gị (VPN’s) deur sava ị jikọọ na iji nweta weebụ. Sava ndị a na-enyere alias ịchekwa mmalite gị ma nwee ike ịṅomi ebe si n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ n’ụwa. Ọ bụ ezie na TOR na-ekpuchi njirimara gị, ọ dịghị ezobe ọnọdụ gị.
Maka ndị na-ejighi ụrụ VPN na mbụ, ị nwere ike tinye otu nke kachasị mma wee banye ExpressVPN. Echegbula ọbụlagodi na ha nwere ụbọchị ụbọchị 30 na – enweghị oge ị ga – enyocha ọrụ ha.
‘N Na-atụ aro VPN mgbe ị na-achọgharị na Ọchịchịrị Ọchịchịrị. Ọ na – agbakwunye ọkwa nchebe ọzọ na data gị ma dieretuin ọnọdụ gị. Biko kwado ndị mgbasa ozi anyị – ExpressVPN is n nrọkwa na ntanetị mgbe ị na-eme nchọgharị Ọchịchịrị.
3. DuckDuckGo bụ enyi gị
Ị na-agagharị na Web Gbara Ọsọ dị iche. Kan u gebruik maak van ‘n emekarị: ‘Google bụ enyi gị’? So, Google anaghị edepụta saịtị na Web Gbara Ọchịchịrị, ya blote n’ebe ahụ, ezigbo enyi gị ga-abụ DuckDuckGo, nke na-arụ ọrụ yiri ya.
4. Debanye aha maka adreesị ozi-e
Ugbu a na ị dị njikere ịga, ọ bụ oge ịdebanye maka adreesị ozi-e na-enweghị ike ịchọta. Gmail si n’ajụjụ ahụ pụta, ị ga-achọ adreesị ozi-e iji deba aha ọtụtụ weebụsaịtị .onion.
Ndị a bụ ole na ole ị ga-enwe ike ịtụle *:
Lelantos (ụrụ akwụ ụgwọ)
* Rịba ama na ndị a na-abịa na .onion ngalaba, nke ịchọrọ ịnweta iji TOR nchọgharị. Ndị nyocha ene niile dịka Chrome na Firefox is beskikbaar.
5. Igwe ntanetị weebụ nchịkwa
.ui bụ ngalaba ejiri kpam kpam na weebụsaịtị Ọchịchịrị. Ndị a yiri ngalaba a na-eme mgbe niile, mana enweghị ike ịnweta ya na-enweghị ihe nchọgharị pụrụ iche dị ka TOR.
Ndị a bụ ụzọ dị mma nke na-enweghị nsogbu .onion adreesị ị nwere ike ịnwale:
Ochichi Nyocha DuckDuckGo
Enwere nnukwu ndepụta nke weebụsaịtị .ionion dị na ọ na-ooi obere mgbalị ịchọta ha. Ọzọkwa, buru n’uche na ị nwere ike ịdaba na ihe ndị ọzọ (na ọzọ, nke na-akwadoghị iwu) na Web Gbara Ọchịchịrị.
Ihuenyo nke ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịrị. Ihe ị nwere ike ịtụ anya ịhụ n’oge ọ bụla na weebụsaịtị Gbara Ọchịchịrị – jidere weebụsaịtị.
Kedu otu nchekwa si dị na Play na Web Gbara Ọchịchịrị?
Ọ na-ada ụda na enwere obi ụtọ nke amaghị ama na ndị a na-adịghị akọwa, mana dị ka oké osimiri na-acha anụnụ anụnụ, ọtụtụ ihe ize ndụ na-ezo. Dịka onye na-agba ọsọ ndụ Joe (ma ọ bụ Jill, dị ka ikpe nwere ike ịbụ), olee otú o si dị ize ndụ iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịrị?
Ọ bụ ezie na e nwere ihe ndị na-eme n’eziokwu na weebụ nke gbara ọkpụrụkpụ na ị gaghị ahụkarị, smallere ụfọdụ n’ime ihe ndị ọzọ na-adịghị na aha (maka gị) kaịịụị ị ga-esi na-asụ ngọngọ.
Enwere ezigbo ihe ọjọọ na ndị gbara ya gburugburu nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu nye gị. Nke a na-emetụta ọ bụghị naanị ndị ọjọọ, ma enwere ezigbo nsogbu nke nsogbu na ndị mmanye iwu, dabere na ihe ị na-eme.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi, ebe a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ihe na-aga n’ihu na ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịrị na ihe si na ya pụta;
N’afọ mbụ a, e boro otu di na nwunye na Verenigde State ebubo maka ịre ọgwụ ọjọọ n’okpuru ụlọ ahịa ahịa nke MH4Life na saịtị dị iche iche ahịa. Ha na-eji weebụ gbara ọchịchịrị ere Ọdịdị, ụdị opioïde nke a na-emejọkarị dị ka ọgwụ ntụrụndụ na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. E jidere ụzọ abụọ ahụ n’agbanyeghị na a na-eji nkọwa nzuzo, netwọk na-emepụta nke ọma dị iche iche na ihe ndị ọzọ na-ezigara ya.
Egbe, Gold na Ego nkịtị
Gaan na die karrière mmadụ 35 na New York in Kalifornië, en in die omgewing van Kalifornië, is daar nie ‘n wêreld nie. N’ime ihe ejidere karịa egbe 100, $ 3,6 na ego na 2000 Bitcoins.
Ntinye na Mmebi Iwu Mmekọahụ
Otu wakker Pools nọ na-eme atụmatụ na-ere otu ihe atụ ndị Brittanje jidere na weebụ gbara ọchịchịrị. Mgbe atụmatụ ya dị ntakịrị, e jidere ya n’Ịtali ebe onye agha ya kwuru na ya na-etu ọnụ na ọ na-enweta ihe karịrị $ 17 nde na-ere ịdọrọ ụmụ nwanyị na ebe nrụọrụ wechụrbara.
Nchịkọta Ntanetị Web
Ebe ọ bụ na anyị kwadoro na e nwere ihe ụfọdụ na-emenye ụjọ na-eme na weebụ ndị gbara ọchịchịrị, ka anyị leba anya n’ụfọdụ ụzọ ị ga – esi zere ha, ọ bụrụ na ọw na –
1- Gbaa mbọ hụ na ihe nchọgharị Tor na njedebe
Ugbu a, 9.0a4 nyochaa nyocha na-abịa ugbu ‘n webwerf na ntinye akwukwọ bọtịnụ Alfa Nchọgharị (maak gebruik van chịrọ ịchọpụta atụmatụ ọhụrụ).
Iji ihe nchọgharị Tor dị mkpa iji gaa na saịtị .onion, mana ngwa niile nwere adịghị ike mgbe ụfọdụ. Gbaa mbọ hụ na ihe nchọgharị Tor gị dị edebe ya ruo oge ma gbalịa ịnọgide na-eleba anya na ọkwa nhụsianya.
.ui njikọ: Ziki ezoro ezo
2. Walzọ Zoro Ezo
N’ịmara na e nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịzụta ebe a, ị ga-amara na ị ghaghị ịkwụ ụgwọ ya. Bebe a dị ka obere akpa dijitalụ ma nye gị ohere transact na Bitcoins. Nnukwu ihe dị iche bụ ezie na ọtụtụ ebe a na-eji obere akpa ejiji di iche iche abụghị ndị a na-amaghị na ọtụtụ ndị na-ekwenyekwara na iwu ego. Die obere akpa akpa bụ … nke ọma, zoro ezo.
.uie njikọ: Market Dream
Ọ bụ iheanya na ụwa ga-enwe nchịkọta .onion, ma ebe ị nọ, Facebook bụ. Nke a na Facebook kwuru na ha mepụtara ndị na-achọ netwọk mmekọrịta na-enweghị aha. Amaghị m na ‘amaghị aha’ na ‘mmekọrịta’ na-arụkọ ọrụ ọnụ, op Facebook .onion na-ekwu na ọ gaghị edebe ndekọ nke ọrụ onye ọrụ.
.ui njikọ: Nchịkọta Onwe
6. Zụta Bitcoins na Blockchain
Bitcoins enyere gị aka ịnọgide na-enweghị aha, ya mere ọ dị ukwuu maka ndị na Tor. Ntak ị gaghị enweta saịtị ‘n ozugbo-werf na njikọ .onion? Ihe na-eme ka saịtị a dị iche iche karịa ụfọdụ ndị ọzọ bụ na o nwere akwụkwọ HTTPS maka adreesị ya .onion!
.ui njikọ: Netpoleaks
Moet Google nie meer asọmpi ya dị ka DuckDuckGO (ọ bụ ezie na m hụrụ aha ahụ n’anya!). TORCH deur soekenjins na minimalisties ị nwere ike ịnwale gị ọ b nala na-arịa ọrịa duck enyi.
.ui njikọ: Ụgbọ okporo ígwè
ExpressVPN by VPN adịchaghị mma nke nyeworo ọtụtụ ndị ọrụ nchebe nzuzo afọ niile. Ntọala ya siri ike nke sava siri ike na-eti mkpu na-enweghị aha na iji kwado ya na ha nwere ụdị ọchịchịrị dabere na saịtị ha.
.ui njikọ: Onye na-agba akwụna
12. Apụl 4 Bitcoin
Kan u ‘n iPhone gebruik van Macbook, of ek kan dit by Bitcoin? Volg nhọrọ n’ebe a maka gị, mana ụdị na nọmba dị oke. ‘N Na-ekpuchi ekwentị niile na-emeghe emepe ma nwee ike ịrụ ọrụ n’ebe ọ bụla n’ụwa.
.ui njikọ: Ogige Ubi
Maka het kwenyere na ‘ndụta’ nwere gewees, op die web is dit nodig om ‘n ichedị mbipụta pụrụ iche te hê. ProPublica word gemaak na ‘n amaja aka ook iji ike, nrụrụ aka na ụdị adịghị ike. Ha abaghị uru ọ bụla ma nwee URL yabasị raara onwe ya new nke ị nwere ike ịnweta site na iji ihe nchọgharị Tor.
.uie njikọ: Bitmessage
16. ụrụ ESCROW
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ nchekwa (?) Iji zụọ ahịa na Ịntanetị, atụla egwu, enwekwara nhọrọ maka gị. Dị ka ụzọ onye ọka iwu nwere ike isi nweta ego na-aga, ya mere, ọrụ ESCROW. Ọbụna ọ na-eme na Bitcoin ka ihe niile bụrụ ihe a na-amaghị.
Ịzụ ahịa na obi gị na ihe niile ha na-arịọ bụ ego 1,5% dị mma. Ha ga-ejide n’aka na ị nwere ike nyochaa ihe ndị ahụ eji ebubo tupu ịtọhapụ ego gị ma mee ka esemokwu esemokwu nke atọ bụrụ ikpe ahụ.
.ui njikọ: Wasabi Wallet
Onye ọ bụla chọrọ ụfọdụ êrens na weebụ mgbe ụfọdụ ma SecureDrop deur kpọmkwem nke ahụ. Otú ọ dị, ọ dị ntakịrị karịa izu, ebe ọ bụ na e mere ya ka ikwe ka ndị na-afụ ụfụfụ nwee ụzọ isi nyefee ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi n’enweghị aha.
Ọ dị mma ịmara na saịtị a ugbu a na-ejikwa ya Nnwere onwe nke Foundation Foundation. ‘N Na-ezoro-data niile ma enweghi njikọ atọ ọ bụla n’ebe ọ bụla. Ọ bụ n’ezie kpam kpam!
.ui njikọ: Sci-Hub
Ajuju ajuputara Na Ntughari N’aga n’iile n’iile
Olee mgbe websaịtị ọjọọ bidoro ‘bido’?
Akụkọ ihe blote eme nke weebụ zoro ezo dị ka ihe ochie dịka akụkọ ntanetị n’onwe ya. Anyị ahụghị ndekọ ndekọ aha nke ezigbo “mmalite ụbọchị” mana anyị kwenyere na Weebụ Ọchịchịrị anyị maara taa malitere n’afọ 2000 na ntọhapụ nke Freenet.
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnọ na Web dị omimi?
Achọpụtaghị saịtị ndị dị na weebụ dị omimi site na nchọta ọchụchọ mgbe niile. Mkpo weebụ miri emi n’onwe ya abụghị iwu na-akwadoghị, mana saịtị ụfọdụ nwere ike itinye aka na-ezighi ezi. Isonye na mmemme ndị ahụ nwere ike ịbụ iwu na-akwadoghị.
Ọchịchị Wee Dị Ọcha?
Dị ka ndụ n’ezie, ‘n na-enwekarị ihe ize ndụ na ntanetị ma weebụ gbara ọchịchịrị adịghị iche. Nchedo bụ nke dị na ọ kachasị mma ịbawanye nchebe gị n’ịntanetị n’agbanyeghị ihe ị na-eme. Otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ site na iji VPN, nke nwere is like izo ya data ma zoo adreesị IP gị n’anya anya. Chọta VPN kachasị mma na ederede m.
Kedu ihe ị ga – eme na websaịtị gbara ọchịchịrị?
Yiri web emeghe, enwere ụdị ọrụ ị ga – eme na ọchịchịrị web, na – esite na ntinye aka na nnọkọ ọnụ ahịa na ịchọgharị ahịa ahịa dị n’ịntanetị. Agbanyeghị, enwerekwa ngwongwo na ọrụ iwu na-akwadoghị na web ojii.
Kedu ihe ị ga – azụta na webụbụ gbara ọchịchịrị
Ọchịchị gbara ọchịchịrị bụ ahịa a na-achịkwaghị achịkwa ebe ndị mmadụ nwere ike ịzụta naanị ihe ọ bụla. Nke a gụnyere egbe, ọgwụ ọjọọ, anụ ọhịa na-ezighi ezi, vidiyo jọgburu onwe ya, paspọtụ adịgboroja, alias Netflix, ozi kaadị krediet, ma ọ bụ ọbụna mgbazinye nke onye kụr.
Enwere ike ịchọọ gị na Tor?
Iji netwọọdụ Tor na-eme ka njiri mara gị nke ọma, mana ọ gaghị ekwe omume. Ọ dị mma karịa iji ọrụ nzuzo raara is op u nuwe da ka ExpressVPN.
DuckDuckGo bụ Ọchịchịrị Ọchịchịrị?
DuckDuckGo bụ igwe na-achọ ihe na-akọwapụta weebụsaịtịon .onion nke pụrụ iche na weebụ gbara ọchịchịrị. Ọ bụghị weebụ gbara ọchịchịrị n’onwe ya. Jy is net ịnweta DuckDuckGo na weebụ gbara ọchịchịrị ebe a: https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/
Ọ bụrụ na ị nwalee ụfọdụ ihe dị n’isiokwu a, site na ugbu a, ị chọpụtala na ihe m nyere gị bụ nsụgharị dị mma nke ihe dị adị na Web Weghachị. N’ụzọ doro anya, ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ bụ ihe iwu na-akwadoghị na agaghị m etinye ha ebe a.
Web Gbara Ọchịchị nwere ike ịbụ ebe nnwere onwe n’ezie. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ikwu okwu n’ezoghị ọnụ banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla, n’agbanyeghị otu aka ekpe ma ọ bụ aka nri, na-enweghị atụ egwu nkeo gdị is. O bu ihe nwute, nke a na-etinye aka na otutu, nke oma, obugh ihe di nma.
Nwee nnwere onwe ma cheta mgbe niile, ọ bụrụ na ị gbalịrị ịnọ na-amaghị aha ma ka na-ejide gị, ị ga-enyerịrị gị ụgwọ maka ọrụ ọ bụla na-akwadoghị na ịchọta na Weebụ Dark. A sị ka e kwuwe, ha jidere ọbụna Saddam Hussein, ọ bụghị ha?
Na-emegharị ọhụrụ, Onye Mmepụta nke Təzə işləri, bụ ngwa ọrụ nlebanye anya dị mfe
Uwa nile nke uwa, dika ndu nke ndu n’ezie, di oke oke nke na o ga – ewe gi ndu ugbua ka i Ghagharia ihe o bula.
Iji mee ka nke ahụ bụrụ eziokwu, sayt na oge ị mexara, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe ike ịmalit ịmalite ọzọ.
Məni bir mə nke ọma, mana ole n’ime gị maara na ịdịnaya ị na-ezute na weebụ bụ obere ọnụ mmiri icepe?
Amma: Tupu ịga n’ihu, ọ dị mkpa ka ị Ghọta na ọtụtụ ihe dị na Web Gbara Ọchịchị na-akwadoghị iwu. N’agbanyeghị ihe ị na-eme, ị ga-enwe ike ịnọ na-amaghị aha. Tinye na ihe ize ndụ gị!
0.2 2. Ntọala Onwe Gị Tụlee ịkwụ ụgwọ etmək
1 Web Gbara Playchịchịrị üçün Played?
1.1 Ọgwụ Dərman
1.2 Egbe, Qızıl na Ego nkịtị
2 Nchịkọta Ntanetị Veb Veb
2.4 6. Blockchain üçün Bitcoins
2.9 16. Ọrụ ESCROW
N’agbanyeghị na ọ dị ugbu a dị ka ihe nchọgharị a na-ejikarị eme ihe iji nweta akụkụ nke Weebụ Gbara Ọchịchị, TOR (aka, i nchọgharị weebụ) na-amepụta iji nyere akheỊw ok ok ok ok.
TOR bụ nsụgharị nke nchọgharị weebụ Firefox, gbanwee iji kwe ka ndị ọrụ na-agagharị na weebụ n’enweghị aha. A na-eme nchọgharị ahụ iji gbochie ma ọ bụ nye ndụmọdụ megide mgbalị ndị ọrụ iji mee ihe ndị nwere ike igosipụta njirimara ha, dịka ịmeghachi akụkụ nke pəncərə küləyi, dịatọọ.
Mgbe na-echere TOR ibadata malikdir, ya da ici rachie otu mpempe akwụkwọ kpuchie anya igwe elekere kamera gị. Ị maghị ihe neere ime var.
TOR – na – lelee vidiyo nke mmeghe saytı.
2. Ntọala Onwe Gị Tụlee ịkwụ ụgwọ etmək
Netwọk Nhọrọ Onwe Gị (VPNs) bụ sava ị jikọọ na iji nweta weebụ. Sava ndị a na-enyere aka ịchekwa mmalite gị ma nwee ike ịṅomi ebe si n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ n’ụwa. Ọ bụ ezie na TOR na-ekpuchi njirimara gị, ọ dịghị ezobe ọnọdụ gị.
Maka ndị na-ejighi ụrụ VPN na mbụ, ị nine ikine tinye otu nke kachasị mma wee banye ExpressVPN. Echegbula ọbụlagodi na ha nwere ụbọchị ụbọchị 30 na – ingilis oge ị ga – enyocha ọrụ ha.
A na-atụ aro VPN mgbe ị na-achọgharị na Ọchịchịrị Ọchịchịrị. Ọ na – agbakwunye ọkwa nchebe ọzọ na data gị ma zoo ọnọdụ gị. Biko kwado ndị mgbasa ozi anyị – ExpressVPN ma nọrọkwa na ntanetị mgbe em na-eme nchọgharị Ọchịchịrị.
G na-agagharị na Web Gbara Ọsọ dị iche. Cheta usoro nke na-emekarị: ‘Google bụ enyi gị’? Google, Veb Gbara’nın düzəldilməsini təmin etmək üçün, ya sadəcə n’ebe ahụ, özgbo enyi gị ga-abụ DuckDuckGo, nke na-arụ.
Ugbu a na ị dị njikere ,ga, ọ bụ oge ịdebanye maka adreesị ozi-e na-engweghị ike ịchọta. Gmail si n’ajụjụ ahụ pụta, ị ga-achọ adreesị ozi-e iji deba aha ọtụtụ weebụsaịtị .onion.
Lelantos (qarışıq akwụ ụgwọ)
* Rịba ama na ndị a na-abịa na .onion ngalaba, nke ịchọrọ ịnweta iji TOR nchọgharị. Firefox brauzerinizi və ya Chrome’u yoxlayın.
.soğan bụ ngalaba ejiri kpam kpam na weebụsaịtị Ọchịchịrị. Ndị a yiri ngalaba a na-eme mgbe niile, man enweghị ike ya nengwhhe ihe nchọgharị pụrụ iche dị ka TOR.
Ndị a bụ ụzọ dị mma nke na-engweghị nsogbu .onion adreesị ị nwere ikne ịnwale:
Nnukwu ndepụta nke weebụsaịtị .onion dị na ọ na-ewe obere mgbalị ịchọta ha. Ọzọkwa, buru n’uche na ị nwere ike ịdaba na ihe ndị ọzọ (na ọzọ, nke na-akwadoghị iwu) na Web Gbara Ọchịchịrị.
Ihuenyo nke ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịrị. Bu, hər hansı bir şeydən başqa bir şeydir ki, hịhị n’oge ọ bụla na weebụsaịtị Gbara Ọchịchịrị – jidere weebụsaịtị.
Web Gbara Playchịchịrị üçün Played?
Ọ na-ada ụda na enwere obi ụtọ nke amaghị ama na ndị a na-adịghị akọwa, mana dị ka oké osimiri na-acha anụnụ anụnụ, ọtụtụ ihe ize ndụ na-ezo. Dịka onye na-agba ọsọ ndụ Joe (ma ọ bụ Jill, dị ka ikpe nwere ike ịbụ), olee otú o si si dị ize ndụ iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịrị?
Ọ bụ ezie na e nwere ihe ndị na-eme n’eziokwu na weebụ nke gbara ọkpụrụkpụ na ị gagị ahụkarị, tinyere ụfọdụ n’ime ihe ndị ọzọ na-adịghị na aha (maka gụịụọarabebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe) ị ga-esi na-asụ ngọngọ.
N’af e mbụ a, e boro otu di na nwunye na Amerika Birləşmiş Ştatları ebubo maka ịre ọgwụ ọjọọ n’okpuru ụlọ ahịa ahịa nke MH4Life na saịtị dị iche iche ahịa. Ha na-eji weebụ gbara ọchịchịrị ere Ọdịdị, ụdị opioid nke a na-emejọkarị dị ka ọgwụ ntụrụndụ na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. E jidere ụzọ abụọ ahụ n’agbanyeghị na na eji nkọwa nzuzo, şəbəkə na-emepụta nke ọma dị iche iche na ihe ndị ọzọ na-ezigara ya.
Egbe, Qızıl na Ego nkịtị
Nyu-York və Kaliforniyadakı 35 saytdan istifadə etmək istərdim. İstifadəyə görə 100, $ 3.6 və ya 2.000 Bitcoins-dən çox pul qazanmaq olmaz.
Otu nwoke Polşa nọ na-eme atụmatụ na-ere otu ihe atụ ndị Britaniya jiddere na weebụ gbara ọchịchịrị. Mgbe atụmatụ ya dị ntakịrị, e jidere ya n’Ịtali ebe onye agha ya kwuru na ya na-etu ọnụ na ọ na-enweta ihe karịrị $ 17 na-ere ịdọrọ ụmụ nwanyị na ebe nrụọrụ weụọ gbara gbara..
Nchịkọta Ntanetị Veb Veb
Ebe ọ bụ na anyị kwadoro na e nwere ihefọdụ na-emenye ụjọ na-eme na weebụ ndị gbara ọchịchịrị, ka anyị leba anya n’ụfọdụ ụzọ ị ga – esi zere ha, ọ b –rụ na ụ na – na na –
Alfa Nchọgharị (maka ndị chọrọ ịchọpụta atụmatụ ọhụrụ) üçün bir sayt ya da ntinye akwukwọ bọtịnụ bir sayt..
Iji ihe nchọgharị Tor dị mkpa iji gaa na saịtị .onion, mana ngwa niile nwere adịghị ike mgbe ụfọdụ. Gbaa mbọ hụ na ihe nchọgharị Tor gị dị edebe ya ruo oge ma gbalịa ịnọgide na-eleba anya na wakwa nhụsianya.
.soğan njikọ: Ziki ezoro ezo
N’ịmara na e nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịzụta ebe a, ị ga-amara na ị Ghaghị ịkwụ ụgwọ ya. Bitkişünasların bir-birinə keçməməsi. Nnukwu ihe dị iche bụ ezie na ọtụtụ ebe a na-eji obere akpa ejiji di iche iche abụghị ndị a na-amaghị na ọtụtụ ndị na-ekwenyekwara na iwu ego. Obere akpa akpa bụ … nke ọma, zoro ezo.
.soğan njikọ: Bazar xəyalları
Ọ bụ ihe ijuanya na ụwa ga-enwe nchịkọta .onion, ma ebe ị nọ, Facebook bụ. Facebook-a müraciət etmə və ya ha-mepụtara ndị na-achọ şəbəkə mmekwegrịta na-enweghị aha. Amaghị m na ‘amaghị aha’ na ‘mmekọrịta’ na-arụkọ ọrụ ọnụ, ma Facebook .onion na-ekwu na ọ gaghị edebe ndekọ nke ọrụ onye ọrụ.
.soğan njikọ: Nchịkọta Onwe
6. Blockchain üçün Bitcoins
Bitcoins Tor-a gị aka ịnọgide na-engweghị aha, ya sadəcə ị dị ukwuu maka ndị na Tor. Ntak ọ gịg? Enweta saịtị a nugikọ .onion? Ie na-eme ka saịtị a dị iche iche karịa ụfọdụ ndị ọzọ bụ na o nwere akwụkwọ HTTPS adresị ya .onion!
.soğan njikọ: Netpoleaks
Dị nnọọ ka Google ndị asọmpi ya dị ka DuckDuckGO (ọ bụ ezie na m hụrụ aha ahụ n’anya!). TORCH bụ axtarış motoru və ya minimalist ị nwale gị ọ bụla na-arịa ördək enyi.
.soğan njikọ: Ụgbọ okporo ígwè
ExpressVPN bụ ọrụ VPN adịchaghị mma nke nyeworo ọtụtụ ndị ọrụ nchebe nzuzo afọ niile. Ntọala ya siri ike nke sava siri ike na-eti mkpu na-engweghị aha na iji kwado ya na ha nwere ụdị ọchịchịrị dabere na saịtị ha.
.soğan njikọ: Onye na-agba akwụna
İPhone dị mgbe ọ chọrọ ka iPhone nke Macbook və ya Bitcoin üçün kkwụ ụgwọ na Enhere nhọrọ n’ebe a maka gị, mana ụdị na nọmba dị oke. A na-ekpuchi ekwentị niile na-emeghe emepe ma nwee ike ịrụ ọrụ n’ebe ọ bụla n’ụwa.
.soğan njikọ: Ogige Ubi
Maka ndị kwenyere na ndị nta akụkọ nweere, web ojii nwere ụdị mbipụta pụrụ iche. ProPublica bụ maka ndị na-amaja aka ike iji ike, nrụrụ aka na ụdị adịghị ike. Ha abaghị uru ọ bụla ma nwee URL yabasị raara onwe ya nye nke ị nwere ike ịnweta saytı na iji ihe nchọgharị Tor.
.soğan njikọ: Bitmessage
16. Ọrụ ESCROW
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ nchekwa (?) Iji zụọ ahịa na Ịntanetị, atụla egwu, enwekwara nhọrọ maka gị. Dị ka ụzọ onye ọka iwu nwere ike isi nweta ego na-aga, ya sadəcə, ESCROW. Bitcoin-i-na-eme na Bitcoin ya na-amagị.
Ịzụ ahịa na obi gị na ihe niile ha na-arịọ bụ ego 1.5% dị mma. Ha ga-ejide n’aka na ị nwere ike nyochaa ihe ndị ahụ eji ebubo tupu ịtọhapụ ego gị ma mee ka esemokwu esemokwu nke atọ bụrụ ikpe ahụ.
.soğan njikọ: Wasabi Cüzdan
Onye ọ bụla chọrọ ụfọdụ ohere na weebụ mgbe ụfọdụ ma SecureDrop bụ kpọmkwem nke ahụ. Otú ọ dị, ọ dị ntakịrị karịa izu, ebe ọ bụ na eere ya ka ikwe ka ndị na-afụ ụfụfụ nwee ụzọ isi nyefee ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi n’enweghị aha.
Ọ dị mma ịmara na saịtị a ugbu a na-ejikwa ya Nnwere on Fond Foundation Fondundan. A na-ezoro məlumatları ilə əlaqəli məlumatları enilehi njikọ atọ ọ bụla n’ebe ọ bụla. Ọ bụ n’ezie kpam kpam!
.soğan njikọ: Sci-Hub
Akụkọ ihe sadəcə eme nke weebụ zoro ezo dị ka ihe ochie dịka akụkọ ntanetị n’onwe ya. Nịọụ ndekọ ndekọ aha nke ezigbo “mmalite ụbọchị” bu Weebụ Ọchịchịrị anyị maara taa malitere 2000 ntọhapụ nke nreenọreenreenreenreenreenreen reen.
Ọ bụ iwu na-akwadoghị Webnọ na Web dị omimi?
Achọpụtaghị saịtị ndị dị na weebụ dị omimi saytı nchọta ọchụchọ mgbe niile. Mkpo weebụ miri emi n’onwe ya abụghị iwu na-akwadoghị, mana saịtị ụfọdụ ne ike itinye aka na-ezighi ezi. Isonye na mmemme ndị ahụ nwere ike ịbụ iwu na-akwadoghị.
Dị ka ndụ n’ezie, na-enwekarị ihe ize ndụ na ntanetị ma weebụ gbara ọchịchịrị adịghị iche. Nchedo bụ nke dị na ọ kachasị mma ịbawanye nchebe gị n’ịntanetị n’agbanyeghị ihe ị na-eme. VPN, ya da VPN saytı ilə tanış deyil, məlumat bazası zoo adreslərinə IP gị n’anya hər hansı bir şəkildə baxa bilər. Chọta VPN kachasị mma na ederede m.
Yiri veb emeghe, ene eredị ọrụ ị ga – eme na ọchịchịrị veb, na – esite na ntinye aka na nnọkọ ọnụ ahịa na ịchọgharị ahịa ahịa dị n’ịntanetị. Agbanyeghị, enwerekwa ngwongwo və ya veb-ojii na akwadoghị.
Ọchịchị gbara ọchịchịrị bụ ahịa a na-achịkwaghị achịkwa ebe ndị mmadụ ne ike ịzụta naanị ihe ọ bụla. Nke a gụnyere egbe, ọgwụ ọjọọ, anụ ọhịa na-ezighi ezi, vidiyo jọgburu onwe ya, paspọtụ adịgboroja, akaụntụ Netflix, ozi kaadị kredit, ma ọ bụ ọbụna mgbazinye nke on.
Tor Enchọọ gị na Tor?
Iji şəbəkə Tor na-eme ka njiri mara gị nke ọma, mana ọ gaghị ekwe omume. Ọ dị mma karịa iji ọrụ nzuzo raara onwe ya nye dị ka ExpressVPN.
DuckDuckGo bụ igwe na-achọ ihe na-akọwapụta weebụsaịtịon .onion nke pụrụ iche na weebụ gbara ọchịchịrị. Ọ bụghị weebụ gbara ọchịchịrị n’onwe ya. Siz iki ịnweta DuckDuckGo na weebụ gbara ọchịchịrị ebe a: https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/
Ọ bụrụ na ị nwalee ụfọdụ ihe dị n’isiokwu a, sayt na ugbu a, ị chọpụtala na ihe m nyere gị bụ nsụgharị dị mma nke ihe dị adị na Web Weghachị. N’ụzọ doro anya, ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ bụ ihe iwu na-akwadoghị na agaghị m etinye ha ebe a.
Veb Gbara Ọchịchị nwere ike ịbụ ebe nnwere onwe n’ezie. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ikwu okwu n’ezoghị ọnụ banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla, n’agbanyeghị otu aka ekpe ma ọ bụ aka nri, na enweghị atụ egwu nd nd. O bu ihe nwute, nke a na-etinye aka na otutu, nke oma, obugh ihe di nma.
Nwee nnwere onwe ma cheta mgbe niile, ọ bụrụ na ị gbalịrị ịnọ na-amaghị aha ma ka na-ejide gị, ị ga-enyerịrị gị ụgwọ maka ọrụ ọ bụla na-akwadoghị na ụchọta na Biz. Bir sị ka e kwuwe, ha jidere ọbụna Səddam Hüseyn, ọ bụghị ha?